बिहान मुख धुँदा साबुनको सट्टामा प्रयोग गर्नुहोस् यी चिज, मिल्छ प्राकृतिक सुन्दरता – Sandesh Press
August 22, 2021 261
काठमाडौँ । अधिकांश मानिसले आफ्नो अनुहार सफा गर्नका लागि साबुन या फेसवासको प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
चिनी पनि छालाको लागि एक एक सस्तो र भरपर्दो घरेलु उपाय हो। यसको प्रयोगले छालामा निखार ल्याउन सकिन्छ।
Prevब्लड प्रेशर हाई छ ? खानामा ध्यान दिनुहोस् यी कुरा, नत्र गर्छ मुटु र दिमाग ठूलो असर !
Nextकोरोनाबाट बच्न प्रयोग गर्नुस् यी आयुर्वेदिक औषधि
मुद्दा फिर्ता लिन्छु भन्दै आइन- Samikshya मेडियामा